TALATA II FIAVIANA – Trinitera Malagasy
Izaia 40, 1-11 / Sal 95 / Md Matio 18, 12-14
Ampionony ny vahoakako: voaonitra ny helony: ny Tanan’ny Tompo no handray ny roa heny onitry ny fahotany. Araka ny ampanarin’ny Boky Eksody (Eks 22, 3.6. 8) dia mila honerana avo roa heny izay zavatr’olona nalaina tsy an-drariny. Ary satria heverintsika fa misaina tahaka antsika Andriamanitra matetika dia nanjary nivilana ny nandikana ny Vaovao Mahafaly nambaran’Izaia: izay nanota dia mila faizina, mila saziana, ary Andriamanitra mihitsy no hanome sazy avo roa heny (kapoka indroa mihantoana) avy amin’ny tanany. Izany ve dia hampionona? Manjary mifanohitra amin’ny fanonerana ny heloka voalaza etsy ambony anefa izany. Olona hosaziana indroa ve dia ho faly? Isika faly satria ny ota natao dia voavela avokoa. Ny fanonerana in-droa miantoana dia efa nataon’ny Tompo ho antsika. Ny Zanany maty teo ambony hazofijaliana ho antsika no porofo fa tsy nivadika tamin’ny teniny Izy.
Tsy midika anefa izany fa afaka manao izay tiany atao ny olona satria mpamindra fo Andriamanitra. Ny antony tsy hanotàna tsy sanatria ny tahotra ny ho voasazy fa satria isika ihany no hizaka ny vokatry ny tsy fiainana araka izay mahasoa. Misy fiantraikany ratsy mandrakariva eo amin’ny fiainana manko ny fahotana, ary tsy sanatria manampy trotraka izany voka-dratsin’ny fahotana izany Andriamanitra fa kosa toy ny Mpiandry ondry: mitady mandrakariva izay hahasoa ny ondriny. Ary raha sanatria misy iray nania, dia tsy mampaninona azy ny handeha hitady iny ary hamela ny 99 ao am-bala. I Md Matio moa tsy mampiasa ny hoe ondry very, fa ondry nania (πλανάω planao), entiny hilazany ireo madinika izay tsy tokony atao tsinontsinona, ireo madinika izay nania satria mety ho tafintohina noho ny tsy firaharahana na sanatria an’izany noho ny drafitra mipetraka ka tsy manafaka fa manandevo ny olona. Ny fanontanian’i Piera amin’ny and. 21 (Mt 18, 21) hoe raha diso im-piry no azo avela, dia vokatr’izany.
Araka ny nolazaintsika omaly ihany, tsy fahefana tahaka ny an’ny Farisiana sy ny Mpanora-dalàna manko ny an’i Jesoa. Ny azy ireo manko dia ny mampianatra ny manavaka ny tsara sy ny ratsy araka ny lalàna no ataony, ka manameloka na manafaka izay heveriny ho mifanaraka na tsia amin’izany. Ny an’i Jesoa koa, fahefana hitadiavana izay hitondrana ny olona rehetra amin’ny famonjena. Mpitsabo mamono ny aretina mba hamelomana ny marary izy fa tsy sanatria mpitsara mamono ny marary miaraka amin’ny aretiny. Ny famelana ny fahotana no lalana itondrany antsika kosa ao amin’ny fahasambarana amin’ny maha-zanaka. Hafaliana kokoa ho an’ny mpiandry ondry ny fahitana ny iray izay nania, hoy i Jesoa.
Mifanohitra amin’ny fahendrena takatry ny mpivavaka ao amin’ny testamenta taloha izany: ny salamo 1 milaza ny olo-marina tsy mba miaraka amin’ny mpanota, ny salamo 101 aza milaza fa isa-maraina dia mandringana ny mpanao ratsy ao amin’ny fanjakany (Sal 101, 8). I Jesoa kosa miara-mihinana amin’ny mpanota sy ny poblikana (Mt 11, 19), ary nolazain’Izaia Mpaminany aza fa dia nosokajiana ho izan’ny ratsy fanahy (Izaia 53, 12).
Mba mampiseho izany toetran’Andriamanitra izany ve ny Eglizintsika? Ny mpivavaka alahady sy ny Komity mbamin’ny isam-baomiera ary ny herivelona rehetra ao am-piangonana ve vonona ny hanao fety amin’ny fiverenan’ny ondry nania? Isika mihevi-tena ho mpianatr’i Kristy ve vonona ny hihosy amin’ireo reraky ny fiainana fa very, nania, tsy mahita ny lalana hombana intsony? Tandremo sao ataonareo tsinontsinona ny iray amin’izy ireny hoy i Kristy mananatra antsika (Mt 18, 10, mialoha ny Evanjely anio).
Aleoko mahita Eglizy maratra nitady ny very toy izay Eglizy bobongolo mihidy amin’ny mahazatra sy ny drafitra ivelany fotsiny, hoy Papa François, teny am-piandohan’ny maha-evekan’i Roma azy. Ampahatsiahiviny anefa (fihaonany tamin’ny pretra tany Assise) fa mialoha ny hivoahana hitady ny very dia tokony ho vonton’ny hanitr’i Kristy, mba tsy hitondra ny saim-patatra fa kosa ny hanitra sy ny fihavaozan’ny Evanjely.
Ndeha isika hiakatra eny an-tendrombohitra, hiakatra tsy an-tongotra fa amin’ny fiainana vonton’ny Evanjely, ka hidradradradra mafy fa tonga ny Tompo Andriamanitra. Hampionona antsika no antony hiaviany.